N'ịhụnanya, n'eziokwu na n'ime mmụọ - IntegritySyndicate.com
Mbido Hụ Mmụọ Eziokwu n'anya N'ịhụnanya, n'eziokwu na n'ime mmụọ
Ịhụnanya ga -akwalite anyị, nke eziokwu na -eduzi, mmụọ nsọ ga -enyekwa anyị ike na njem anyị, ọgbakọ Ndị Kraịst anyị, na ijere ụwa ozi.
Ịhụnanya nke Chineke nyefere mmadụ site na Kraịst ya bụ ntọala omume anyị niile. N'ihi ịhụnanya, Chineke kpọlitere Jizọs ka ọ bụrụ nzọpụta nye ụwa. N'inwe obi Nna ahụ, Jizọs jiri ndụ ya chụọ àjà maka ịhụnanya. Site n'ịhụnanya a anyị nwere mgbaghara mmehie ugbu a, na ndụ ọhụrụ n'ime Mmụọ, dị ka ụmụ Chineke. Ọ bụkwa ịhụnanya a na -enye anyị nnukwu olileanya ịta oke na mbilite n'ọnwụ nke ndụ, site na nkwa ka anyị banye n'ala -eze nke Chineke anyị. N'ezie ije -ozi anyị bụ amara na ebere nke ịhụnanya Chineke nke e nyere anyị site na Kraịst Jizọs; ya bụ, Oziọma.
Chineke bụ ịhụnanya. Ya mere, ikwesị ntụkwasị obi anyị nye ya na -adabere na ntinye onwe anyị n'ịhụnanya. Iwu Chineke dum na -emezu n'omume ọma a. N'ezie, mgbe a jụrụ ya ajụjụ banyere iwu kachanụ, Jizọs kwuru, sị, "Nke kachasị mkpa bụ, 'Nụrụ, Izrel: Onyenwe anyị Chineke anyị, Onyenwe anyị bụ otu. Na ị ga n'anya were obi gị dum na mkpụrụ obi gị dum na uche gị dum na ike gị niile wee were Onyenwe anyị Chineke gị. ' Nke abụọ bụ nke a: 'Ị ga n'anya onye agbata obi gị dị ka onwe gị. Ọ dịghị ihe ọ bụla ọzọ e nyere n'iwu nke ka ndị a ukwuu. ” Ịhụ na ịhụnanya bụ ebumnobi nke ndị Chineke niile, ọ bụ ebumnobi bụ isi nke ụka a. Ịhụnanya na -agbapụta, na -ejikọ ọnụ ma na -ewuli elu. Ịhụnanya na -edi ihe niile, na -atụ anya ihe niile ma na -ekwerekwa ihe niile. Ịhụnanya zuru oke nke Chineke na -ebibi egwu niile na -eweta udo nke karịrị nghọta. N'ezie, a ga -emerịrị ihe niile maka ịhụnanya na ịhụnanya. Ka ịhụnanya Chineke zuo oke n'ime anyị ka anyị bụrụ ndị na -eso ụzọ Kraịst n'ezie!
Ịhụnanya zuru oke n'eziokwu, n'ihi na ịhụnanya Chineke enweghị ikewapụ n'eziokwu ya na ikpe ziri ezi ya. N'ihi na ọ bụ site n'okwukwe n'eziokwu ka a ga -esi bụrụ ndị ezi omume anyị na -enweta amara na nzọpụta nke Onye Kasị Elu. Ozi nke ihunanya Chineke ga -abụrịrị nke a ga -arụzu dịka nghọta nke Okwu ya siri dị. Okwu Chineke bụ ihe dị mkpa maka ije ozi ka anyị na -anata nkwa dịka o siri dị n'okpuru ọnọdụ ya. Enyere nkwa na mkpughe nke Chineke site na Abraham, Aịsak na Jekọb, site na Moses na iwu, na site na ndị amụma. Akwụkwọ -nsọ ndị ọzọ dekọtara mmekorita nke Chineke na ndị ya na -egosipụta okwu ya jiri ọtụtụ ihe iriba -ama na ịgba -ama. N'ikwekọ n'okwu e kwuru site n'iwu na ndị amụma, anyị na -agba ama maka atụmatụ na ebumnuche Chineke maka ụwa. N'ezie, mgbapụta Chineke maka mmadụ hiwere isi na Kraịst ya, dịka amara ya na eziokwu ya na -emezu n'ime Jizọs. Yabụ, ije ozi ịhụnanya anyị nke ndị ozi ga -ekwekọ n'okwu nke eziokwu. N'ịtụkwasị obi, anyị kwenyere na Oziọma bụ okwu Chineke emezuru, ọ bụghị ihe mmadụ mepụtara.
A ga -edo ọgbakọ nke ụka nsọ n'eziokwu. N'ime mbọ anyị niile, anyị ga -eje ozi n'eziokwu nke Akwụkwọ Nsọ. Ofufe anyị na -efe Chineke, okwukwe anyị nwere n'ime Onyenwe anyị Jizọs, ọrụ nke nzukọ ụka - ihe niile ga -abụrịrị eziokwu nke Okwu Chineke. Akwụkwọ nsọ bụ ikike kacha mkpa n'ihe niile gbasara okwukwe bụ ìhè na -edu anyị. Ọ bụghị n'ọdịnala ka a ga na -edu anyị kama ọ bụ Okwu Chineke n'ime mmụọ nke eziokwu.
Anyị ga -agba mbọ idobe nkuzi dị mma karịa nkuzi nke mmadụ nke dabara n'ọchịchọ mmadụ. Anyị ga -eguzogide ịbụ ndị ifufe ozizi ọ bụla na -ebugharị site na nkuzi mmadụ ma ọ bụ atụmatụ aghụghọ na atụmatụ aghụghọ. Anyị agaghị anabata nkuzi nke nkuzi ọ bụla nke na -emebi ebumnuche ịhụnanya nke sitere n'obi dị ọcha, ezi akọ na uche na ezi okwukwe. Anyị ekwesịghị ịkpafu site na ihe ndị a site n'ịkpafu gaa na mkparịta ụka efu gbasara iwu. Edebere iwu abụghị maka ndị ezi omume mana maka ndị mmebi iwu na ndị na -enupụ isi, maka ndị na -adịghị asọpụrụ Chineke na ndị mmehie, maka ndị na -adịghị ọcha na ndị rụrụ arụ, maka ndị na -eme omume rụrụ arụ - ihe ọ bụla megidere ezi nkuzi. Anyị ga -ezere nkuzi efu na nke rụrụ arụ nke na -emegiderịta ma na -akpọ ihe ọmụma n'ụzọ ụgha. Ndị ahụ na -ekwupụta ozizi nke mmadụ apụwo n'okwukwe. Tụlee ndị akaebe nke Akwụkwọ Nsọ ndị kwuru Okwu Chineke - tụlee ihe ga -esi na ụzọ ndụ ha pụta ma imitateomie okwukwe ha.
Ebe eziokwu nke Okwu Chineke bụ nri anyị siri ike, mmụọ nke Chineke bụ ihe ọ drinkụ ourụ anyị. N'ihi ịhụnanya ya nke pụtara ìhè n'ime Jizọs Kraịst, anyị na -anata Mmụọ Nsọ ugbu a. Jizọs natara n'aka Nna ahụ ime baptizim na Mmụọ Nsọ dịka ebuliri ya elu ugbu a n'aka nri Chineke. Nkwa nke Mmụọ Nsọ ga -emezu n'ozi anyị nke Oziọma. Chineke bụ mmụọ, ndị na -efe ya ofufe ga -efe ofufe n'ime mmụọ na n'eziokwu. N'ime Kraịst, anyị ga -ejupụta na Chineke na -anata ume ya dị nsọ. Site na Mụọ nke etinyebere n'ime anyị, anyị na -aghọ ụlọ -nsọ nke Chineke dị ndụ. N'ezie, mmụọ ya nke bi n'ime na -eme ka anyị guzosie ike dị ka ụmụ Chineke. Ndụ ọhụrụ nke Mmụọ Nsọ na -asachapụ anyị ma na -amanye anyị n'ezi omume niile. Site na Kraịst, Chineke na -awụnye n'ime anyị mmiri nke mmụọ nsọ, na -ejupụta n'obi anyị n'ịhụnanya, na -enye anyị udo pụrụ iche na ọ joyụ na -enweghị atụ. Mmụọ ahụ bụ onye nkasi obi anyị na -enye mmekọrịta chiri anya na Chineke na -agba akaebe n'ime anyị maka eziokwu nke nzọpụta anyị. Ndị niile mmụọ Chineke na -edu bụ ụmụ Chineke n'ihi na anyị bịara mara Chineke ma mezuo uche ya site na mmụọ.
Ije -ozi Ozi -ọma n'uju gụnyere ịrụ ọrụ n'ime Mụọ n'okpuru ite mmanụ. Anyị agaghị eje ozi n'okpuru koodu ochie edere, kama na ndụ ọhụrụ nke Mmụọ. Anyị agaghị akụzikwara okwu amamihe dị na -enweghị mmụọ, ka obe obe Kraịst ghara ibelata. Kama, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga -echere wee nye anyị ike site n'elu. Mmụọ Nsọ ga -abụ ihe mkpali anyị - na -agbanwe, na -arịọ arịrịọ, ma na -enye anyị ike dịka uche Chineke si dị. A na -arụ ọrụ nke nnapụta ọgwụgwọ ọrụ ebube site na ebe ndị mmụọ ọjọọ n'ike nke mmụọ. Anyị kwesịrị ịchụso onyinye ime mmụọ, mana ọ kachasị ka anyị wee buo amụma. Amụma esiteghị n'ọchịchọ mmadụ, mana mgbe mmadụ na -ekwu okwu site na Chineke dịka Mmụọ Nsọ na -enye ike mmụọ nsọ wee buru ya. A na -egosi ihe iriba -ama na ihe -ebube site n'ike nke Mụọ. Nkwuwa okwu anyị na mkpali anyị bụ ka ume nke Chukwu mee nke a. Anyị ga -egosipụta ọgbụgba ama nke Chukwu banyere eziokwu nke Chineke site n'ike ya. Anyị agaghị abụ nke okpukpe kpọrọ nkụ, kama anyị ga -abụ okwukwe dị ndụ - iketa mmụọ nke Chineke nke na -abịa site na Kraịst.
 Jọn 3:16, Ndị Rom 5: 8, 1 Jọn 4: 9-10
 2 Ndị Kọrịnt 5:14, Jọn 15:17, Ndị Efesọs 5: 2
 Luk 24: 46-47, Ọrụ 2:38, Ọrụ 10:43, Ọrụ 13:38, Ọrụ 26:18, Ndị Efesọs 1: 7, Ndị Hibru 2:17, 1Peter 2:24, 1Peter 3:18, 1 Jọn 4: 10, Mkpughe 1: 5
 Ndị Rom 5: 5, Ndị Galetia 3:14, 4: 6, Ndị Efesọs 1:13
 Luk 6:35, 20: 34-36, Ndị Rom 8: 14-16, 23, Ndị Galetia 3:26, Ndị Galeshia 4: 4-7, 1 Jọn 3: 1
 Luk 1:78, Jọn 3:16, Ndị Rom 6:23, 1 Jọn 4: 9 Jud 1:21
 Luk 4:43, Luk 12: 31-33, Mak 12: 32-34, Ndị Rom 8: 16-17, Ndị Efesọs 2: 4, 2 Ndị Kọrint 4: 1, Jud 1:21 Jemes 2: 5
 Ndị Rom 3:24, Ndị Rom 5:15, 1 Ndị Kọrịnt 2: 9, Ndị Efesọs 1: 6-7, Ndị Efesọs 2: 5, 8, Ndị Hibru 4:16
 Mak 1: 14-15, Mak 16:15, Ọrụ 20:24, Ndị Rom 1:16, 1 Ndị Kọrịnt 9:23, Mkpughe 14:16
 1 Jọn 4: 7-8, Abụ Ọma 100: 5, 103: 8,
 Jọn 15: 9-10, 1 Jọn 3: 10-11, 1 Jọn 4: 7-8, 16, 19-21
 Diuterọnọmi 6: 5, Luk 10:27, Ndị Galeshia 5: 13-14, Jemes 2: 8
 Jọn 15: 9-10, Ndị Rom 13: 8-10, Ndị Galetia 5: 6, Ndị Efesọs 1: 4
 1Cor Corinthiansans 13: 7
 Ndị Rom 5: 1, Ndị Rom 14:17, Filipaị 4: 7, 1 Jọn 4:18,
 1 Ndị Kọrint 13: 1-3, 13, 1 Ndị Kọrint 16:14
 Jọn 13: 34-35, Jọn 14: 21-24, Jọn 15: 9-13, Jọn 17: 20-26, Ndị Efesọs 3:19, Ndị Efesọs 4: 15-16, 1 Jọn 3:23
 Ndị Efesọs 1:13, Ndị Kọlọsi 1: 5, 2 Jọn 1: 3
 Ndị Efesọs 3: 4-12
 Jọn 14: 6, Ndị Kọlọsi 1: 5, Ndị Efesọs 1:13, Ndị Efesọs 4:21
 Ndị Galeshia 1: 11-12
 2 Ndị Kọrint 13: 5-8
 2Cor Corinthiansans 4: 2
 2 Timoti 4: 2-4
 Ndị Efesọs 4: 14
 1Timothy 1: 3-5, 1Timothy 6: 3, 1Timothy 6: 12-14, Titus 2: 1-10
 1 Timoti 1: 6-7, 1 Timoti 4: 1-5, Ndị Kọlọsi 2: 12-23, Ndị Hibru 13: 9
 1 Timoti 6: 21
 Ndị Hibru 13: 9, 2 Ndị Tesalonaịka 2:15, 1 Ndị Kọrịnt 11: 1-2, Ndị Efesọs 5: 1-21
 Jọn 4: 10-14, 1 Ndị Kọrint 12:13, Ndị Efesọs 5:18
 Ọrụ 2: 32-33, Ndị Rom 5: 5
 Ọrụ 2: 32-33, Jọn 1: 32-34, Jọn 7:39, Mak 1: 8, Luk 3:16, Luk 24:49, Ọrụ 1: 4-5, Ọrụ 2:38, Ndị Rom 8:34
 Luk 24:49, Ọrụ 1: 4-6 Ọrụ 2: 38-39, Ọrụ 8: 14-17
 Jọn 6:63, Ọrụ 2: 32-33, Ọrụ 8: 14-17, Ndị Galeshia 3:14, 1 Jọn 4:13
 1 Ndị Kọrịnt 3:16, 6:19, Ndị Efesọs 2:22
 Jọn 3: 3-8, Ndị Rom 8: 15-16, Ndị Galetia 4: 6, Ndị Efesọs 4: 30
 Jọn 6:63, Ọrụ 15: 8-9, Ndị Rom 8: 10-14, 1 Ndị Kọrint 6:11, 2Tesalonaịka 2:13, Ndị Galeshia 5: 5, Taịtọs 3: 5
 Ndị Rom 5: 5, Ndị Rom 8: 6, Ndị Rom 14:17, Ndị Rom 15:13, Ndị Galeshia 5: 22-23
 Ọrụ 5: 30-32, 2 Ndị Kọrịnt 1:22, 5: 4-5, Ndị Galeshia 5: 5, Ndị Efesọs 1: 13-14, Ndị Efesọs 2:18
 a: Ndị Rom 8:14-b: Luk 3: 21-22 Luk 4: 18-19, Ọrụ 10: 37-38, Luk 3:16, Ọrụ 2: 1-4, 17-18, 38-39, Jọn 3: 3-8, Jọn 6:63
 Ọrụ 7:51, Ndị Rom 7: 6, 2 Ndị Kọrịnt 3: 3-6, Ndị Galeshia 3: 2-3, Ndị Galeshia 5:22
 1 Ndị Kọrint 1:17, 1 Ndị Kọrint 2: 1-5, 1Tesalonaịka 1: 5-6, 1Tesalonaịka 5:19
 Luk 11:13, Luk 24: 47-49, Jọn 14: 12-13, Ọrụ 2: 4-5, Ọrụ 4: 29-31, Jud 1: 19-20
 Ndị Rom 8: 26-27, 2 Ndị Kọrịnt 3: 17-18, Ndị Efesọs 3:16
 Ọrụ 4: 29-31, Ọrụ 10: 37-39
 1 Ndị Kọrint 14: 1-6
 2 Pita 1:21, Mkpughe 1:10
 Ọrụ 4: 29-31, Ndị Rom 15:19, Ndị Galeshia 3: 5, Ndị Hibru 2: 4
 Ọrụ 4: 29-31, Ndị Rom 12:11, Luk 12: 11-12, Matiu 10:19